Ivive APK Download Download for Android [Nooca Ugu Dambeeya] - Luso Gamer
Naqshadeeyayaasha APK Download Download ee Android [Nooca ugu dambeeyay]
Waxaa laga yaabaa 17, 2021 Waxaa laga yaabaa 14, 2021 by Shweta Tripathi
Weli sawirradu waxay keeneen kacaan nolosha aadanaha. Laga soo bilaabo taariikhda keydinta taariikhda dambe illaa astaamaha xusuusta illaa xusuusinta oo lagu farxo waqtigii hore. Laakiin Ivive APK waxay ciyaartaas u qaadaysaa heer cusub.
Sawirada iyo sawirada waxay wataan macnayaal kala duwan dadka kaladuwan. Xitaa shakhsi kasta, waxay bixiyaan aragti ka duwan markasta oo la fiiriyo. Mararka qaarkood waxay naga caawiyaan kaftankayaga xusuusta, mararka qaarkood iyagu waa isha kaliya ee macluumaadka annaga, waxay u sheegaan sheekooyin, waxay wadaagaan daqiiqadyo, waxayna horay u sii wataan wixii aan soo wadnay.
Marka, xilligan caqliga iyo farshaxanka casriga ahi wuxuu u oggolaanayaa u beddelayaa qadiimiyadan iyo khasnadaha inay noqdaan wax jajabiya. Haddii aad rabto, waxaad ka heli kartaa Adeegga Ivive App-ka taleefanka gacankaaga Android ama kiniin bilaash ah boggan.
Waa maxay nooca loo yaqaan 'Ivive APK'?
Ivive waa aalad siinaysa muuqaal cusub iyo saadaalin sawirada aan eeganeyno. Waxay ku fulisaa muuqaalkan si otomaatig ah iyadoo la adeegsanaayo xaqiiqda jirta. Tani waxay abuurtaa qaab cusub oo cajiib ah dareenka iyo muuqaalka muuqaalka, iyadoo lagu darayo animations cajiib ah.
Marka maxaad noo siin weyday sanamyadeena. Markasta oo aan eegno iyaga ha noo ogolaadaan wax aan ka fakari karno isticmaalka maskaxdeena. Markaan shaqaaleyno mala-awaalkeena, aan daacad noqonno, waxay leedahay xadad. Dhammaanteen kulligeen innagu ma nahay Picassos ama Van Goghs.
Taas ayaa la yiri. Marka maxaa dhacaya haddii aannaan noqon karin kuwa male awaal ah sida qoraa Avatars ama fanaaniinta caanka ah. Waxaan u isticmaali karnaa tikniyoolajiyadda si ay taasi taas noogu sameyso.
Developer Soo qaado
Magaca Xidhmada wada noolaansho
Loobaahanyahay Android 4.3 iyo sare
Hadana haddii aad taqaanid xaqiiqda waxbashada, waad ogaan kartaa sida ay saameyn ugu leedahay qaabkeenna dunida iyo aragtideena.
Adeegga 'Ivive App' wuxuu leeyahay dhammaan awooddaas oo loogu baahan yahay inuu ku qaado hal-abuurka qaab heer ka sarreeya awoodda aadanaha. Hadaadan hubin waxaan ka hadlayno. Ka eeg barnaamijka laftiisa adoo adeegsanaya aaladdaada Android.
Khibradaha dunida ee wali sawir iyo sawir qaab cusub ah. U arag dhaqdhaqaaq iyo ku dayasho nolosha qaab cusub, cabsi leh, iyo qaab lama filaan ah.
Markaad abuurto animation cajiib leh sawirkaaga aad jeceshahay, waa waqtigii aad la wadaagi laheyd asxaabtaada ama warbaahinta bulshada si aad ula yaabto taageerayaashaada.
Sida loo soo degsado APKive APK?
Si aad u hesho barnaamijkan cabsida leh taleefankaaga casriga ah kaliya raac tallaabooyinka sida ka hooseeya.
Marka hore, u gudub xiriirinta soo degsan ee hoosta taabashada Download Download bar ka
Aad meesha kaydinta aaladda mar haddii habka soo dejinta la soo gabagabeeyo oo soo hel faylka.
Dhagsii si aad u bilowdo rakibida
Ku xoojiso xulashada aaladaha aan lagaran meel laga soo dejiyo taleefanka
Taabo dhowr jeer in ka badan oo halkaas ayaad joogtaa.
Hada waxaad kahelaysaa meesha loo yaqaan 'Ivive APK' shaashadda qalabka oo aad riix si aad u furto. Hadda waxaad ku dari kartaa sawirrada oo aad arki kartaa sixirka. Hal shay oo ay tahay in la xuso ayaa ah inaysan la shaqeyn doonin dhamaan sawirada. Shaqada ayaa ku xaddidan sawirada uu appku kuu sheegi doono iyada oo calaamad u ah astaamaha.
Wax lamid ah adiga:
Nooca loo yaqaan 'Ivive APK' waa hab cabsi leh oo lagu muujiyo sawirada qaab cusub. Ayadoo la kaashanayo xaqiiqda waxbashada, waxay ku siinaysaa waayo-aragnimo cusub oo cajiib ah. Si aad ugu raaxaysato barnaamijkan gaarka ah ee leh dusha sare kaliya hel faylka adoo gujinaya isku xirka soo dejinta ee qalabkaaga Android.
Categories Apps, Entertainment Tags Faan-libaax APK, App Ivive Post navigation
Movidy Apk Kusoo Bixiso Kusoo Socoto Android [Barnaamijyada Madadaalada]
King Farsamo VM APK Download Download for Android [PUBG Virtual]